Horyaalka Champions League: Haa, waxay sameeyeen - TELES RELAY
ACCUEIL » SPORTS Champions League: Haa, waxay sameeyeen
Champions League: Haa, waxay sameeyeen
Waxay yihiin dhallinyaro, firfircoon, firfircooni leh, laakiin oh aad u qurux badan ! Daafaca da 'yarta Ajax Amsterdam, oo qandaraaskiisa daafaca ka ciyaara Andre Onana, ayaa ku guuleystay abaalmarin kale oo uu ku xayiray mid ka mid ah tartamayaasha waaweyn ee Juventus, Turin iyo Cristiano Ronaldo. Waxa ay aheyd sagaal sanadood tan iyo markii Ronaldo uu si habsami leh u socdo marxaladan tartanka.
Si kastaba ha ahaatee, waxa uu aqbalay in Real Madrid ay u dirto Talyaaniga si ay ugu soo bandhigto koobkan xilli ciyaareedkii hore.
Laakiin waxaa la soo saaray koox fiican oo caleemo dhalinyaro ah oo ka soo jeeda seddexda wareega isreebreebka, taas oo ah mid sahlan.
Si kastaba ha ahaatee, ka dib barbaraha lugtii koowaad, Juve aad ayay ugu kalsoonaatay. Waxyaabaha ay ku jiraan qeybtii hore ee talaadada ayaa xitaa ka sii badatay dhinaca jihada, sababtoo ah waxay inta badan haysataa mudo dheer.
Ronaldo ayaa sidoo kale kubada shabaqa ku soo taabtay (1-0, 28e) ka hor intaanay carruurtu wax qabsan.
Waa Van de Beek oo si dhakhso ah u qiimeyn doona dhibcaha (1-1, 34e), u oggolaanaya labada kooxood in ay tagaan fasaxyada dhibcaha dhexdhexaadka ah. Hadafkani wuxuu boogaha siin doonaa saaxiibada kooxda ee André Onana.
Ajax si hufan qaadataa ciyaarta on isaga u gaar ah qeybtii labaad ee ciyaarta iyo Jirin cajiib ah goolhayaha kooxda Juve ayaa waxaa si deg deg ah qaadato biyaha on. Waa on Daafaca in cormer Matthijs de Ligt dhexe, helay in ay si wanaagsan oo aan ka yarayn laba daafac oo aan ugu yaraan ka, Bonucci iyo Rugani, oo dhaliyay goolka in ka dhigi doonaa farqiga (1-2, 67e).
André Onana iyo qoyskiisa ayaa sii wadi doona inay ku riyoodaan.
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://actucameroun.com/2019/04/17/champions-league-oui-ils-lont-fait/
Messi ayaa ku filan inuu Barcelona ku guuleysto Champions League